इकोनोमिक अपडेट : June 2016
ललितपुरमै बसेर भीआईपीहरूले यहाँको विकासलाई उपेक्षा गरिरहेका छन्
ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघमा दोस्रोपटक अध्यक्ष बनेका अजरमान जोशी व्यावसायिक तथा सामाजिक क्षेत्रका अगुवा हुन् । पुरानो मुद्रण व्यवसायी परिवारका जोशी हाल हस्तकला र सञ्चार व्यवसायमा पनि संलग्न छन् । ललितपुर नगरभित्र व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सीसीटिभी राखेर लोकप्रिय भएका उनी हस्तकला, पर्यटन तथा कृषि उत्पादनका लागि यो जिल्ला संसारकै नमुना क्षेत्र बन्न सक्ने बताउँछन् । मच्छिन्द्र क्याम्पसबाट व्यवस्थापनमा स्नातक उनी पुरातात्विक तथा परम्परागत कला संस्कृति अध्ययन गर्न होमस्टे प्रवद्र्धनमा पनि उत्तिकै अग्रसर छन् । दोस्रो कार्यकालमै आफ्ना योजना पूरा गर्ने र भावी नेतृत्वलाई आधार तयार गर्ने उनको योजना छ । उनी रोटरी क्लब अफ पाटन दरबार स्क्वायरको प्रेसिडेन्टसमेत रहिसकेका छन् । करिब २ दर्जनभन्दा बढी सामाजिक एवं व्यावसायिक संघसंस्थामा आबद्ध उनी ललितपुर महोत्सवले यस क्षेत्रको लोकप्रियता बढाएका कारण यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँछन् । नेपालले ब्रान्डिङ गर्न नसक्दा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’को अवधारणा जापानबाट भिœयाउनुपरेको तर ललितपुरमा पहिल्यै स्थापित ‘एक टोल एक उत्पादन’ लाई चिनाउन चुकेको बताउने उद्योगी जोशीसँग गरिएको कुराकानी
ललितपुर जिल्लाको आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको विकास अहिले कसरी अघि बढिरेहको छ ?
ललितपुर औद्योगिकका साथै कला–संस्कृतिको नगरी पनि हो । पाटन औद्योगिक क्षेत्र यहीं छ । परम्परागत सीपमा आधारित उद्योग पनि यही छन् । अधिकांश घरेलु र परम्परागत तथा सीपमूलक उद्योग पनि छन् । घरेलु रूपमा मात्रै हस्तकलाको विकास भइरहेको अवस्था छ । यहाँका गाउँ–गाउँमा पनि धेरै उद्योग छन् । हस्तकलाजन्य वस्तु भनौं वा परम्परागत सीप भएका वस्तु यही पाइन्छन् । विभिन्न गाविसमा आफ्नै हिसाबका उत्पादन छन् । धेरै सम्भाव्यता भएका वस्तु तथा क्षेत्र पनि छन् । त्यसकारण हामीले ललितपुरलाई सम्भावना बोकेको जिल्लाका रूपमा लिएका छांै ।
मुलुकमा ललितपुरको छुट्टै विशेषता छ, यहाँका मौलिक उत्पादनदेखि परम्परागत उद्योगको व्यावसायिक विकास गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो काम प्रवद्र्धन गर्ने नै हो । हामीले प्रवद्र्धनात्मक काम गर्दै आएका पनि छौं । यसका लागि हामीले महोत्सवबाट काम सुरु गरेका छौं । यसले हरेक उत्पादनलाई पहिचान दिन सहयोग गर्छ । ललितपुर भौगोलिक विविधता भएको जिल्ला पनि हो । दुर्गम गाविस यही छन् र सुगम पनि छन् । उपमहानगर र नगरपालिका पनि छन् । संघको नाताले सबैलाई समेटनुपर्छ र समेट्न खोजेका छांै । तर, भौगोलिक जटिलताका कारण सबैलाई एकै ठाउँमा समेट्न कठिन हुने देखेर हामीले आफैं जानुभन्दा प्रत्यक्ष शाखाका वस्तुगत संघमार्फत पहिचान दिन क्रियाशील बनाउने र यसैगरी प्रवद्र्धन गर्न खोजेका छांै ।
ललितपुर पर्यटकीय नगरका रूपमा पनि चिनिन्छ । यहाँ पर्यटकको संख्यात्मक वृद्धि कत्तिको छ ?
यहाँका कला, संस्कृति, हस्तकला तथा पर्यटन परिपूरकजस्तै हुन् । ललितपुर जुन हिसाबले पृथक छ त्यसको मौलिक पहिचान पनि त्यत्तिकै महत्वको छ । यहाँ आफ्नै मौलिकता बोकेका हेरिटेज होम छन् । तर, दुःखको कुरा यहाँ अहिलेसम्म पनि ठूला होटल छैनन् । स्टार होटल बनिसकेका छैनन् । तर, जुन आधारमा ललितपुरलाई यहाँ युनेस्कोले हेरिटेज होमका रूपमा विकास गर्न खोजेको छ, त्यसपछि भने यहाँको विकासमा उत्साह मिलेको छ । सफलता पनि मिल्दै गएको छ । स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नै लगानीमा हेरिटेज होम बनाउने क्रम जारी छ ।
यहाँको आर्थिक विकासको माध्यम पर्यटन प्रवद्र्धन पनि हो । पर्यटन प्रवद्र्धनको माध्यमबाट आर्थिक रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । यसले समग्र मुलुकको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा दिन्छ । पछिल्ला दिनमा पर्यटकको आगमनमा समेत वृद्धि भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।
पर्यटन र हस्तकलालाई पर्यायवाची भन्नुभयो, यी क्षेत्रहरूको सँगै विकास गर्ने अर्थात पर्यटन र हस्तकलालाई जोडने कुनै योजना छ ?
पक्कै पनि छ । हामीले प्रत्येक ३ वर्षमा ललितपुर महोत्सव गर्दै आएका छौं । महोत्सव भनेको पर्यटनदेखि लिएर मौलिक पहिचान बोकेका वस्तुहरूको प्रवद्र्धन, बजारीकरण गर्ने अनि लुकेका वस्तु देखाउने र तिनको पहिचान खोज्ने हो । हामीले त्यसलाई बृहत् र पृथक रूपमा सञ्चालन गर्न खोजका छौं । समुदायमा आधारित विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजना पनि अघि सारेका छौं । स्थानीय समुदायलाई नसमेटी विकास सम्भव छैन । त्यसैले बढीभन्दा बढी स्थानीयलाई समेटेर यहाँको विकास र प्रवद्र्धनमा हामीले कदम चालिसकेका छौं । यसले पक्कै हस्तकलादेखि लिएर यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्नेछ ।
यसमा स्थानीय सहयोगको पाटो पनि होला, सहयोग पाइरहनुभएको छ ?
कुनै पनि ठाउँको विकासका लागि स्थानीयको सहभागिता आवश्यक छ । संयुक्त रूपमा जागरण आवश्यक छ । हाम्रो काम प्रवद्र्धन गर्ने र आवश्यकताअनुसार सहजीकरण गर्ने हो । त्यसैले संघकै अगुवाईमा विभिन्न महोत्सव गर्ने योजना बनाएका छौं । यसमा हामीले सहयोग पाइरहेका पनि छौं । स्थानीय चुनाव नहुँदा हामीमाथि नै धेरैको भरोसा रहेको पाएको छु मैले । हामीले समग्र नगरको विकासका लागि पनि समन्वय गर्दै आएकाले सहकार्य छ ।
ललितपुर भौगोलिक रूपमा ठूलो छ, यहाँ सुगम सहरदेखि दुर्गम गाउँ पनि छन् । तपाईंहरूले कसरी उपस्थिति जनाइरहनुभएको छ ?
सबै ठाउँमा पुग्न सम्भव छैन । त्यही कारण हामीले नगरपालिकाभन्दा बाहेकको गाउँलाई समेटेर शाखा उपशाखा र सम्पर्क कार्यालय खोल्ने कार्यक्रम छ । जो धेरै पहिलेदेखिको योजना थियो । शाखा विस्तार गर्न नसक्ने ठाउँमा उपशाखा विस्तार गर्ने योजना छ भने एकदमै दुर्गममा सम्पर्क कार्यालय विस्तार गर्ने सोच छ ।
ललितपुरमा धेरै परम्परागत उद्योग छन् । यी उद्योगलाई आधुनिकीकरणतर्फ लैजाने योजना छैन ?
महासंघमार्फत सरकारले ‘एक गाउँ एक उत्पादन’को अवधारणा ल्याएको छ । त्यसलाई हामीले जापानबाट आएको मोडेल हो भनेर चिन्ने गरेका छौं । दुःखको कुरा, हामीले बोल्न नजानेर या लेख्न नजानेको हो, यो मोडेलमा हामी त पहिलेदेखि नै परिचित हौं । ललितपुरमा टोल–टोलको आफ्नै पहिचान छ । भन्नै पर्दा यहाँ ‘एक टोल एक उत्पादन’ छ । त्यो इतिहास हामीले कोर्न सकेनौं ।
च्यासल माटाका भाडा बनाउने, सुकुल परालजन्य वस्तु बनाउने क्षेत्र, उखुबाली र नागबाल मुर्तिकलाका लागि परिचित छ । गाविसका आफ्नै विशेषता छन् । लुबुको टेक्सटाइल भनौं या चापागाउँको दूधजन्य परिकार या बुङमतीको उडकार्पेट या त खोकनाको तेल । कुनै ठाउँमा चिया कुनै ठाउँमा कफी छ । तरकारीको त्यस्तै पहिचान छ ।
हामीले यसलाई पनि इतिहासमा कोर्न आवश्यक छ । जापानबाट होइन नेपालबाटै उत्पत्ति भएको छ । हामी यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अघि बढेका छौं । हाम्रो विधानमा पनि छ । अबको सामूहिक प्रयास संघले गर्ने र शाखा कार्यालयहरूलाई क्रियाशील बनाउने हो । क्षेत्रगत संघहरूलाई पनि सहभागी बनाउन खोजेका छौं ।
विभिन्न वस्तुगत संघ र जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघबीच विवाद हुँदैन ?
हामी कुनै पनि तालिम आफैंभन्दा वस्तुगत संघमार्फत नै गर्छौं । हस्तकला, सुनचाँदी तालिमजस्ता कार्यक्रम उनीहरूमार्फत नै समन्वयात्मक रूपमै सञ्चालन भइरहेको छ । हामी वस्तुगत संघसँग मात्र होइन कि स्थानीय चुनाव नभएको परिस्थितिमा हामीले सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । सीसीटिभी यसैको उपज हो । यसका लागि ललितपुर सेफड भनेर खडा गरेका छौं । र, यसमा अरू पनि निक्कै उत्साहित भएर लागेका छन् ।
तपाईंले ललितपुरमा अहिले समस्याचाहिँ के देख्नुभएको छ ?
समस्या त धेरै छन् । फुटपाथ, फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापनलगायत अरू तिरका जस्तो लगानीमैत्री वातावरणका समस्या यहाँ पनि छन् । हामीले आफैं पनि सक्रियताका साथ यसको व्यवस्थापन गर्दै आएका छौ । प्रेसर ग्रुपका हिसाबले पनि काम गरिरहेका छौं ।
तपाईं आफ्नो दोस्रो कार्यकालको अन्तिमतिर हुनुहुन्छ, यसपटक निर्वाचित भएपछि के उल्लेख्य काम गर्नुभयो ? तपाईंले व्यवसायी र स्थानीयवासीको रेस्पोन्स कस्तो पाउनुभएको छ ?
सबै साथीभाइको सहयोगले राम्रै काम गरेजस्तो लाग्छ । तर, यसको मूल्यांकन म आफैंलेभन्दा अरूले गर्नु उचित हुन्छ । मिडियाले पनि मेरो दोस्रो कार्यकालको मूल्यांकन गरोस् भन्ने चाहन्छु । म सामाजिक कामका लागि यहाँ आएको हो, सक्दो गरेको छु । मैले जे गरें त्यसले हाम्रो संस्थाको गरिमा बढाएको छ । ललितपुरलाई चिनाउने, यहाँको निकासी बढाउने अनि उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने काममा म हिजो पनि लागेको थिएँ, आज पनि लागिरहेछु । भोलिका दिनमा संस्थामा रहँदा या नरहँदा पनि मैले ललितपुरको प्रवद्र्धन गर्न पहल गर्नेछु ।
अर्को कुरा, बजार प्रवद्र्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार आवश्यक छ । मैले २ कार्यकालमा सम्बन्ध विस्तार र यो नगरलाई चिनाउनमा अथक प्रयास गरें । भियतनाम, पाकिस्तान, भुटानमा समग्र ललितपुरको प्रवद्र्धन गर्नमा केन्द्रित रह्यौं । यसलाई थप विस्तार जरुरी छ । सीसीटिभीको सुरुवात पनि भएको छ । फुटपाथको व्यवस्थापन गर्न खोजिएको छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रले सञ्चालनमा ल्याएको ‘ए कगाउँ एक उत्पादन’को कार्यक्रम ललितपुरमा अहिलेसम्म लागू हुन सकेन नि !
‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कृषिमा आधारित छ । तर, यहाँ उत्पादनमूलक क्षेत्र बढी छन् । बडिखेल क्षेत्रमा पहिले अर्किड र सुनाखरी थियो तर त्यो ५ वर्षपछि फेजआउट भयो । निर्यात प्रवद्र्धनका लागि हामीले पर्याप्त उत्पादन गर्न सकेनौं । अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सक्रियतामा ‘एक गाउँ एक उत्पादन’को कुरा आएको छ । सरकारी निकायमा समन्वय अभाव हुुँदा ललितपुरमा यो कार्यक्रमले प्राथमिकता पााउन सकेन । विशेष रूपमा यो गैरकृषि भएकाले ओझेलमा परेको छ । ललितपुर परम्परागत रूपमा परिचित छ । त्यसकारण हामीले ललितपुरलाई हस्तकलाको जिल्लाका रूपमा परिचित बनाउन आग्रह गर्दैै आएका छांै ।
गैरकृषि भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, अधिकांश ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । तर, हस्तकला गैरकृषिजन्य उत्पादन भयो । गैरकृषि हुने बित्तिकै यसको जिम्मा उद्योगलाई दिइयो कृषिलाई दिइएन । यही कारण यो कार्यक्रम हाम्रो जिल्ला ओझेलमा परेको छ । उद्योग मन्त्रालयले कसरी कार्यान्वयन भन्ने कुरामा ध्यान दिन सकेको छैन । यहाँका उत्पादनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउने देखेर हामीले हस्तकला नगरीका रूपमा चिनाउन आग्रह गरेका हौं । परम्परागत सीपको प्रवद्र्धन गरे हस्तकलाको निकासी बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो आशय हो ।
कतिपय जिल्लामा सरकारी सहयोग नपाउँदा विकासका महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित भए भन्ने सुनिन्छ । तपाईंहरूलाई सरकारी सहयोग कत्तिको छ ?
हामीले सरकारी सहयोग त्यति पाएका छैनौं । सरकारले दिने तालिम हो, त्यसमा पनि तालिमको नाममा कनिका छर्ने काम भएको छ । यो एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । महासंघमातहतका वस्तुगत संघमार्फत कार्यक्रम गराउँछौं । हामीले परम्पराको जगेर्ना गर्न खोजेका हौं । रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले गर्न सकिन्छ । हस्तकला संघलाई के–के चाहिन्छ त्यसतर्फ जान सकिन्छ अर्बौ रूपमा खर्च हुन्छ तर त्यसको उपलब्धि प्रमाणपत्रबाहेक केही देखिँदैन । कसलाई के चाहिन्छ त्यसको आधारमा स्वरोजगार त्यहाँबाट विकास हुन्छ ।
यहाँका धेरै उत्पादन निर्यातको सम्भावना बोकेका छन्, के सुविधा भयो भने निर्यात बढाउन सकिएला ?
हाम्रो सरोकार हस्तकला मात्रै नभएर अन्य पनि छन् । भएकालाई प्रवद्र्धन गर्न जरुरी छ । लुुभुको टेक्सटाइल निर्यात भएको छ एरोबिक जातिको कफी पनि निर्यात हुन्छ । हस्तकलाका पनि नयाँ–नयाँ उत्पादन आइरहेका छन् । विस्तार भइरहेका छन्, जसले घरेलु महिलालाई स्वरोजगारको अवसर छ । हामी शाखामार्फत प्रवद्र्धन गराउँछौं कहिले विभिन्न वस्तुगत रूपमा गर्न खोजेका छौं । मेला महोत्सवका साथै भुटान, चीन, भियतनाममा पनि बजार खोजिरहेका छौं । युरोप, अमेरिका पनि जान खोजेका छौं । अझ पृथकरूपमा जान खोजेका छौं । हाम्रा उत्पादनको बजारीकरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।
सरकारका विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी)हरू प्रायः ललितपुरमा बस्छन् । ललितपुरको समग्र विकासमा उनीहरूको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
राजनीतिक दलका नेता, सभासद, बुद्धिजीवी, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षदेखि लिएर महासंघका अधिकांश पूर्वअध्यक्ष पनि यही बस्छन् । यति मात्र होइन, मन्त्री क्वाटर पनि यही छ । उहाँहरूले ललितपुरको पहिचान देखाउनुपर्ने हो तर त्यसमा ध्यान दिनुभएको छैन, उपेक्षा गर्नुभएको छ । हामी पनि त्यसमा धेरै चुकेका छौं । धेरै हदसम्म हामी बोलेका छांै, तर यहाँ सभागृह छैन, बाटोघाटोको अवस्था कमजोर छ । समग्रमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन । कान्ती राजपथ फास्ट ट्रयाकको कुरा छ । सबैको सरोकारको कुरा पनि हो । सडक बत्ती छैन । सार्कमा सोलार आए तर ललितपुरमा ल्याइएन । अब भने सबैलाई घचघच्याउने बेला आएको छ ।
तपाईंहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पछिल्लो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यो महासंघको इतिहासमै दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । यस्ता घटना दोहोरिनुहुँदैन । हामी सबै व्यवसायी एक हुनुपर्छ । संस्था नरहे हामी व्यवसायी रहँदै नौं । महासंघलाई अझ सशक्त रूपमा लैजानुपर्छ भन्ने मेरो राय छ । त्यसका लागि मैले आफ्नो ठाउँबाट हर प्रयत्न गर्नेछु ।
तपाईंहरूकै सक्रियतामा १ वर्षअघि ललितपुरका मुख्य–मुख्य सहरमा सीसीटिभी जडान भएको थियो । यो कत्तिको प्रभावकारी देखियो ?
सीसीटिभीको कुरा गर्दा हामीले वस्तुगत संघका सदस्यलाई सहभागी बनाएर जिविस नगरपालिका उवासंघको सानो बजेटबाट काम सुरु गरेका हौं । जावलाखेल परिसरमा मोनिटरिङ रुम राखेर जाउलाखेल कुमारीपाटी लागनखेल गाबहालमा ससिीटीभी जडान गरेका छौं । अब यसलाई थप क्षेत्रमा विस्तार गर्दैछौं । सीसीटीभीको प्रभाव सकारात्मक छ । सीसीटीभी राखेको छ भनेपछि स्वतः सचेत हुने रहेछन् । हामीले प्रशंसा पनि पाएका छौं । दोस्रो चरणमा सबैले मिलेर गरांै भन्ने नै भएको छ । यसले व्यावसायिक सुरक्षादेखि सबैलाई सहयोग गरेको छ । यसले सामाजिक सुरक्षामा ठोस योगदान पु¥याउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छांै । यसमा हाम्रो संस्थागत, निजी व्यवसायी र स्थानीय निकाय ३ पक्षबाटै बजेट परिचालन गर्ने योजना छ । अबका दिनमा यसलाई पाटनढोका, एकान्तकुनातिर विस्तार गर्छाैं । स्थानीयलाई सहयोग गर्ने कोही इच्छुक छ भने त्यसमा सहभागी बनाउने मोडालिटी बनाउन लगेका छौं ।
गत वर्ष आयोजित ललितपुर महोत्सव राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको थियो, यो कसरी सम्भव भयो ?
हामीले निकै तयारी गरेर मात्रै महोत्सब आयोजना गरेका थियौं । यसमा सबैलाई सहभागी बनाएका थियौं । त्यसमा विभिन्न जातीय समुदायलाई पनि सहभागी गराउन खोजेका थियांैं । अर्कोतर्फ, राजनीतिक अन्योलका बेला पनि तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई उद्घाटन गर्न आमन्त्रण गरेर धेरै मन्त्री तथा सचिव आउनुभयो । त्यसैको परिणाम हुनसक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मेला तथा महोत्सवमा सहभागिताको उद्देश्य के हो ?
हामीले ललितपुरका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन र प्रदर्शन गर्न खोजेका छौं । भुटान, भियतनाममा पनि हामी मेला, महोत्सवमा सहभागी हुँदै छौं । भुटानामा हरेक वर्ष ३० देखि ४० स्लट लान्छौं । एजुकेसनल फेयरमा पनि ललितपुर (हामी) लाई जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रमोसनल क्रियाकलापमा हामी बामे सर्दै छौं । यसको एउर्ट उद्देश्य ललितपुरको विकासमा टेवा पु¥याउनु हो ।
तपाईंले बाँकी कार्यकाललाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
मैले यस जिल्लाको छवि उज्यालो बनाउन कोसिस गर्नेछु । व्यक्ति एक्लै कहिल्लै सफल हुँदैन, त्यसका लागि टिम वर्क चाहिन्छ । ललितपुर महोत्सवबाट पनि हामीले धेरै समस्या उजागर गर्न खोजेका छौं । सुरुमा हामीलाई प्रमुख अथिति खोज्न समस्या थियो, पछि आफैं सक्रियता देखाउनुभयो । त्यसबाट हामी उत्साहित भयौं । हेरिटेज वाकको रूपमा धेरै राजदूतहरू आउनुभयो । अग्रजले पूरा गर्न नसकेका तथा मेरै कार्याकालमा सुरु भएका कामलाई निरन्तरता दिनेछु ।
केही मौलिक योजना पनि छन् कि ?
हामी मूलतः सबैलाई एकै थलोमा राख्नुपर्छ भन्नेमा छौं । ललितपुरको पाटन दरबारमा लाइट राख्ने तयारी गरिरहेका छौं । यो एकदमै मौलिक हुनेछ । यसमा लगानी गर्न सरकारी निकाय हिचकिचाइरहेको अवस्था छ । एउटाले नसके हातेमालो गरेर भए पनि अघि बढ्ने योजना छ ।
१ खर्बको निकासी लक्ष्य यो वर्ष पनि नपुग्ने
काठमाडौं, २७ जेठ वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु तथा सेवा विदेश निर्यात गर्ने निजी क्षेत्रको लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षमा पनि नपुग्ने देखिएको छ । आवको ९ महिनासम्ममा ४६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै वस्तु तथा सेवा निकासी भएको छ । लक्ष्य पु¥याउन बाँकी तीन महिनामा थप ५४ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन सम्भव देखिँदैन । चालू आवमा ६० देखि ६५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा निकासी हुने अनुमान छ । देशको व्यापार घाटा कम गर्ने र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारी बढाउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तीन वर्षअघि निकासी व्यापारलाई बढाएर वार्षिक एक खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । महासंघअन्तर्गतको निर्यात परिषद्का सभापति अनुपबहादुर मल्ल सरकारकै असहयोगका कारण लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको तर्क गर्छन् । “आव ०७०÷०७१ मा झन्डै ९० अर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु निकासी भएको थियो । सरकारले सहयोग गरेको भए ०७१÷०७२ मै एक खर्ब निकासीको लक्ष्य पूरा हुन्थ्यो,” उनले भने । १० प्रतिशत नगद अनुदान दिए यो क्षेत्र प्रोत्साहित हुने उनको भनाइ छ । पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा चालू आर्थिक वर्षमा भूकम्प र नाकाबन्दीको असर निकासी व्यापारमा परेको बताउँछन् । निकासीजन्य उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउन नसक्दा निकासी व्यापार घट्दै गएको उनको भनाइ छ । नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) मा उल्लेख भएका वस्तुले मात्र व्यापार घाटा कम गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् । “नेपालकै कच्चा पदार्थमा आधारित औद्यागिक उत्पादन र उच्च मूल्यका वनस्पतिजन्य उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ,” उनले भने, “अहिलेको वाणिज्य नीतिले मात्र यसलाई समेट्दैन ।” निकासीयोग्य वस्तुको पहिचानपछि निकासीको बजारसम्म पु¥याउने मूल्य शृंखलाको व्यवस्था नभएसम्म निकासी बढाएर एक खर्ब पु¥याउन नसकिने उनको भनाइ छ । नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष चण्डीप्रसाद अर्याल पनि राज्यबाटै असहयोग भएका कारण लक्ष्य पुग्न नसकेको बताउँछन् । “सरकार आफैंले आयातलाई प्रोत्साहन गर्दा निकासी उद्योग ठप्प हुने र व्यापार घाटा चुलिने अवस्था आएको हो,” उनी भन्छन् । नेपालबाट गलैंचा, तयारी पोशाक, छाला तथा छालाजन्य सामग्री, चिया, अदुवा, टेक्स्टाइल, पश्मिना, फेल्ट, हस्तकलालगायत सामग्री निर्यात हुँदै आएको छ । आयात भने पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, इलेक्ट्रोनिक्स सामग्री, सवारी साधन तथा एक्सेसरिज, कपडा, टेलिकम उपकरण, रासायनिक मल, सिमेन्ट आदि बढी हुन्छ ।
संस्थान निजीकरण नगर्नु खुला अर्थतन्त्रविरुद्ध होइन
४ दशकयता राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील सोमप्रसाद पाण्डे अहिले उद्योगमन्त्री छन् । औद्योगिक विकासबिना मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध हुन नसक्ने बताउने उनी ७ वटै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने उद्घोष गरेर उद्योगी÷व्यवसायीबीच लोकप्रिय बनेका छन् । मन्त्री भएपछि सरकारी संस्थानलाई निजीकरण नगर्ने र सरकारले पनि सञ्चालनमा नल्याउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका उनी लगानीको वातावरण निर्माणका लागि ऐनकानुन तर्जुमामा जुटेको बताउँछन् । कानुन विषयमा स्नातक र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गरेका उनीसँग वन, कृषि, अटोमोबाइल्स, फर्निचर, पश्मिना, छापाखानालगायत दर्जनौं उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालनको अनुभव पनि छ । व्यावसायिक माहोलमा हुर्किएका उनी ढुक्क भएर लगानीको वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता ठान्छन् । मुख्यगरी, राजनीतिमा क्रियाशील रहेका उनी कुनै बेला वकालत र पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि संलग्न थिए । प्रस्तुत छ, विनाशकारी भूकम्प, मधेस आन्दोलन र त्यससँगैको नाकाबन्दीपछि मुलुकको औद्योगिक अवस्था, यसको विकासका लागि सरकारी प्रयासबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले मन्त्री पाण्डेसँग गरेको कुराकानी -
उद्योग मन्त्रालय अहिले के गरिरहेको छ ?
मुलुकमा औद्योगिक विकास नभई रोजगारी सिर्जना हुँदैन र रोजगारीबिना जनताको जीवनयापनमा परिवर्तन ल्याउन सकिँदैन । आर्थिक विकासको मुख्य आधार नै औद्योगिक क्षेत्र भएकाले मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन गरी उद्योग स्थापना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवालाई व्यवसाय र औद्योगिक क्षेत्रतर्फ आकर्षित गराउने, विदेशी लगानी बढाउने सवालमा आवश्यक प्रयत्न गरिरहेको छ । औद्योगिक वातावरण बनाउन मन्त्रालय प्रयत्नशील छ । बन्द अवस्थामा रहेका संस्थानलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर अध्ययन सुरु गरिएको छ । यसको केही दिनमै टुंगो लाग्नेछ ।
सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन भनिन्छ नि !
त्यसो भन्न मिल्दैन, सरकारले औद्योगिक वातावरण बनाउन नखोजेको होइन, नसकेको हुन सक्छ । यहाँ आइसकेपछि उद्योग मन्त्रालयको मर्मअनुरूप अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने सवालमा मैले प्रयत्न गरिरहेको पनि छु । उत्पादन बढाउने, निकासी अभिवृद्धि गरी आयात घटाउने सवालमा मन्त्रालयले आवश्यक पहलकदमी लिएको छ । औद्योगिक वातावरण बनाउनु मुख्य कुरा हो, ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु अहिलेको आवश्यकता पनि हो । त्यसका लागि चाहिने कानुनी प्रावधान र अन्य राजनीतिक वातावरण बनाउने पहल भइरहेको छ । उपयुक्त वातावरण बनाउन के कस्ता पहल गर्न सकिन्छ भनी मन्त्रालय लागिपरेको छ ।
अर्को कुरा, औद्योगिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउन पनि मन्त्रालयले पहल सुरु गरेको छ । यसकै सेरोफेरोमा रहेर वातावरण बनाउने आधार तय गरिरहेका छौं । ऐनकानुन जो बाधक छन् तिनीहरूलाई हामी संशोधन गर्छौं । वातावरण तय गर्नकै लागि यी सबै प्रयास गरिएका हुन् ।
तपाईं उद्योगमन्त्री भएर आएको ६ महिना नाघिसकेको छ । यस अवधिमा तपाईंले के कस्ता उपलब्धि हासिल गर्नुभयो ?
म मन्त्री भएको दिनदेखि कसरी औद्योगिक विकास हुन्छ भनेर लागिपरेको छु । औद्योगिक विकासबिना हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौं भन्ने सरकारले पनि बुझेको छ । यसलाई नै आधार मानेर हामीसँग भएका कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखी मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको छ । म यस मन्त्रालयमा आइसकेपछि पहिलो चरणमा खानीजन्य उद्योगको अनुसन्धान सुरु भएको छ । त्यस्तै, मुलुकलाई औद्योगिकीरणमा लैजाने भनेर नयाँ संविधानअनुसार विभाजन गरिएका ७ वटै प्रदेशमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ । उद्घाटन भएको १ वर्षसम्म पनि सेज सञ्चालनमा नआएपछि त्यसको अध्ययनअनुसन्धान गरेर कार्यान्वयनका लागि हामीले कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागेका छौं । यसैगरी पेट्रोलियम उत्पादनका लागि उत्खनन्को काम पनि भइरहेको छ । नीतिगत सुधारका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सेज ऐन ल्याउन मैले विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेको छु । अन्य संरचनागत सुधारका प्रयत्न पनि भएकै छन् ।
वैशाखको विनाशकारी भूकम्प, त्यसपछिको मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले औद्योगिक अवस्था खस्किएको छ । तपाईंले यसको सुधारका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी निकै समस्यामा छौं । वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्प अनि मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले औद्योगिक वातावरण खस्किएको छ । यसका लागि सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नै पर्छ । नेपालको छविमा सुधार भयो भने मात्रै लगानी आउँछ । नयाँ उद्योग खुल्छन् । रोजगारीका अवसर प्राप्त हुन्छन् भन्ने सरकारले बुझेको छ । जहाँसम्म लगानीमैत्री वातावरणको सवाल छ, हामीले संविधान बनाइसकेका छौं । राजनीतिक अधिकारका लागि लामो समय खर्चियौं । त्यसपछि मात्र हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौं । अबको लडाइँ मुलुक समृद्ध बनाउने लडाइँ हो । त्यसैले नयाँ सोचका साथ मुलुक निर्माणमा लाग्न जरुरी भइसकेको छ । यसकै लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने प्रयत्न मैले गरेको छु ।
तपाईंले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार आर्थिक सशक्तीकरणको एजेन्डा हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । अब कुनै पनि उद्योगीले जग्गा खरिद गरेर उद्योग खोल्न गाह्रो छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्देश्यसहित सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । यसलाई संविधानले पनि निक्र्योल गरिसकेको छ । संविधानअनुसार नै ७ प्रदेशमा १÷१ वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम अघि बढिसकेको छ । जसमध्ये प्रदेश नम्बर १ मा झापाको दमक, प्रदेश–२ मा सर्लाही, प्रदेश–३ मा हेटौंडाको मयुरधाप, प्रदेश–४ मा लेखनाथको पटनरी, प्रदेश–५ मा बुटवलको मोतिपुर तथा नेपालगन्जको नौबस्ता, प्रदेश–६ मा सुर्खेत तथा जुम्ला र प्रदेश ७ मा कञ्चनपुरको दैजीमा ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुनेछन् । हामीले ठूलो योजना बनाएका छौं, मन्त्रिपरिषद्ले पनि निर्णय गरिसकेको छ । यसले औद्योगिक वातावरणमा धेरै हदसम्म सुधार हुने देखेको छु ।
सरकारले १ वर्षअघि सञ्चालनमा ल्याउन खोजेको सेज उदघाट्नमै सीमित भयो, कसरी अघि कार्यान्वयन होला नयाँ योजन ?
सेज १ वर्षअघि उद्घाटन भएको थियो । तर, हतारमा गरिएको प्रयासले पनि हुन सक्छ– सेज कार्यविधिमा राखिएका केही सर्त व्यवसायीले ग्रहण गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यही समस्याले भैरहवाको सेज उद्घाटनमै सीमित भयो । अर्को कुरा, सेजमा लक्षित समूहभन्दा अन्य व्यवसायीको रुचि देखियो । मुलुकलाई आवश्यकभन्दा अन्य उद्योग गुट्खा, सुर्तीजस्ता उद्योगका लागि निवेदन आए । लक्षित उद्योग आउन सकेनन् । अहिले आएर सेज सञ्चालनका विषयमा गहन अध्यन भइसकेका छन् । हामी कार्यविधि संशोधनको तयारीमा छौं, संशोधनपछि भैरहवाको सेज सञ्चालनको बाटो खुल्नेछ ।
सेज, औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको कुरा भइरहँदा अधिकांश संस्थान बन्द अवस्थामा छन् । सञ्चालनमा रहेका संस्थान पनि घाटामा छन् । बन्द संस्थान खुलाउने विषयमा सरकारको धारणा के छ ?
सरकार सबै सरकारी उद्योग चलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । मुलुकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी नेपाल औषधि व्यवस्था लिमिटेड, हेटौंडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, कृषि औजार कारखाना चलाउने तयारी छ । यी उद्योग कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषयमा आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । तर, सरकार निजीकरणको पक्षमा छैन, उपयुक्त मोडालिटीको पक्षमा छ ।
तपाईंले मन्त्री भएपछि संस्थानलाई निजीकरण नगर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको छ । सरकार खुला बजार अर्थतन्त्रको नीतिबाट पछि हटेकै हो त ?
यो बुझाइ गलत हो । सरकार खुला बजारको पक्षमै छ । विगतका अनुभवले गर्दा संस्थानलाई निजीकरण गर्नुहुँदैन भन्ने सरकारले बुझेको छ । संस्थानलाई निजीकरण नगर्ने भनिए पनि सरकार आफैंले उद्योग चलाउन खोजेको होइन र सक्दैन पनि । तर, कुन मोडलमा चलाउने भन्नेमा निक्र्योल भइसकेको छैन । निजीकरणको पक्षमा पनि छैन सरकार । उदाहरणका लागि हामीले भृकुटी कागज कारखानालाई लिन सक्छौं । जुन उद्योग ९८ प्रतिशत कच्चा पदार्थमा आधारित थियो । निजीकरण भयो र कारखाना नै समाप्त भयो । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना निजीकरणपछि चल्न सकेन । सरकारको स्वामित्वमा राखेर चलाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । जहाँसम्म सरकार नै खुला बजार अर्थतन्त्रको विपक्षमा छ भन्ने कुरा छ । कुनै पनि मुलुकमा सरकारी स्वामित्व नभएको उद्योग छैन । सञ्चालनको स्वामित्व कुनै न कुनै मोडलबाट सरकारसँग छ । यदि सरकारले औषधि उद्योग चलाएर केही स्टक गर्न सकेको भए नाकाबन्दीका बेला धेरै राहत हुन्थ्योे भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो । संस्थान सञ्चालनको विषयमा सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो
तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेकै अवस्थामा निजी क्षेत्रले अहिलेसम्मकै ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुप¥यो तर राहतका प्याकेज दिन सक्नुभएन नि !
अहिलेको सरकार निकै चुनौतीका साथ गठन भएको थियो । वैशाखको भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएकै बेला तराई–मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दी भयो । विगतको सरकारले झेल्दै आएका समस्यालाई आत्मसात् गर्दै अहिलेको सरकारले काम गर्दै आएको हो । यी सबै समस्याबाट बढी प्रभावित भएको क्षेत्र पनि उद्योग क्षेत्र हो । यो क्षेत्रसँगै आबद्ध उत्पादक, उपभोक्ता सबै प्रताडित हुन पुगे । मैले यो मन्त्रालय सम्हालिसकेपछि पटक–पटक निजी क्षेत्रसँग छलफल भयो । केही राहत दिने भन्नेमा सरकार सहमत भयो । निजी क्षेत्रलाई राहतकै लागि पुनरुद्धार कोष खडा भयो । त्यसमा सरकारका तर्फबाट १ खर्ब रकम राखिएको छ । निजी क्षेत्रका अधिकांश माग÷सुझाव सम्बोधन भएकै छन् । यसबाट केही व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ भन्ने महसुस भएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई राहत दिने गरी ल्याइएको पुनरुद्धार कोष अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, के छ समस्या ?
जस्तो संयन्त्र बनेको हुन्छ त्यहीअनुसार नै कार्यान्वयन हुने हो । यो सुरुवात हो र आगामी दिनमा अझै राम्र्रा प्याकेज पनि आउन सक्छन् । कोषलाई सरकार तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ । केही काम त भइसकेकै छ । नुवाकोटमा मात्रै २०० जति उद्योगलाई सहुलियत दरमा ब्याज मिनाहा गर्ने काम भइरहेको छ । यो सुरुवात हो ।
उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने खालका नीति छैन भन्ने सुनिन्छ, अवस्था यस्तै हो ?
यो सान्र्दभिक विषय हो । हाम्रा लागि लगानी प्रमुख आवश्यकता हो । सम्भावना धेरै छ । नीतिनियम तथा ऐनकानुनलाई समयसापेक्ष बनाउने प्रयास जारी छ । ऐनकानुनले गर्दा पनि उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्ने काममा कमी भएको पक्कै हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन तत्काल ल्याइनेछ । सेज ऐन पनि तत्काल पारित गर्न लागेका छौं । त्यसैले ढुक्क भएर लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा पु¥याउनु जरुरी भइसकेको छ ।
तपाईं उद्योग÷व्यवसायमा आबद्ध पनि हुनुहुन्छ । कस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्दा नेपाललाई लाभ हुन सक्छ ?
पर्यटन, जलविद्युत्, खानी, कृषिमा आधारित उद्योगमा लगानी गर्दा लाभ लिन सकिन्छ । यी विदेशी लगानीका उपयुक्त क्षेत्र हुन् । नेपालमा काम गर्नका लागि अनुकूल वातावरण छ, चिसोका कारण कामै गर्न नसकिने कुनै ठाउँ छैन, ४५ डिग्रीभन्दा बढी गमी हुँदैन । हावापानी पनि राम्रो छ । त्यस्ता ठाउँ युरोप अमेरिकामा छैनन्, भर्जिन ल्यान्डहरु छन् त्यहाँ पाइला परेको छैन । अर्को मासु उद्योग पनि फस्टाउन सक्छ । एकै ठाउँमा लाखौंकोे संख्यामा भेंडाबाख्रा पाल्न सकिने जमिन नेपालमा छ । केही चिज काम नलग्ने हुँदैन, रौं पश्मिनाका लागि सर्वोत्कृष्ट छ । मासुको युरोप, अमेरिकामा ठूलो माग छ, हाडसिंगबाट टाँक उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुक भूपरिवेष्ठित भएकाले हामी हाई भ्यालुमा जानै पर्छ । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले स्थानीयस्तरमा आधारित कच्चा पदार्थ सुरु गर्ने अनि उनीहरूलाई उच्च प्रविधिमा लानुपर्छ । यी क्षेत्रमा लगानी भिœयाउन सकियो भने नेपाललाई लाभ हुन्छ ।
यी क्षेत्रमा लगानीचाहिँ कसरी भिœयाउन सकिन्छ ?
अब हामी परिवर्तन हुनै पर्छ । मुलुकको लडाइँ भनेको आर्थिक समृद्धिको हो । हिजोका दिनमा के भए सबै बिर्सेर अघि बढ्नु जरुरी छ । व्यावसायिक वातावरणमा सुधार भएको छ । श्रमिक आन्दोलन पनि कम भएका छन् । ऐनकानुन सुधारोन्मुख छन् । त्यसैले पनि लगानी आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन भन्ने गुनासो पनि छ नि !
यो विषयमा मैले निजी क्षेत्रको भावना बुझेको छु । उहाँहरूको गुनासो सुनेको छु । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रलाई पथप्रदर्शन गर्ने, नियमन गर्ने, बाटो देखाउने काम गर्ने हो । उहाँहरूका कतिपय कुरा जायज छन् । उद्योगी÷व्यवसायी नाफा कमाउने नाममा संकीर्ण हुनुहुँदैन । उद्योग मन्त्रालय उद्योगीको अभिभावक नै हो । उनीहरूलाई नियमन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले तदारुकता देखाउनु स्वाभाविक हो । उहाँहरूको मनसाय बुझेरै हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत विभिन्न सुविधाको व्यवस्था गरेका छौं । ती सुविधा कुनै पनि कानुनले रोक्न सक्दैन ।
लगानीको वातारवण बनाउने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको सहयोग कस्तो छ ?
निजी क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएकै छ । ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रकै छ । कतिपय कमी पूरा गर्नेतर्फ लाग्नु जरुरी छ । सरकार–निजी क्षेत्र सँगै हिँड्न सक्यो भने औद्योगिक विकास सम्भव छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई विश्वास नगर्दा औद्योगिक विकास हुन सकेन भनिन्छ नि !
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेको छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारलाई विश्वास गरेकै पाएको छु मैले । सबै संयन्त्र सरकारसँग छ र काम गर्ने, लगानी गर्ने निजी क्षेत्रले हो । निजी क्षेत्रबाट भएका प्रयत्नको सरकार सधैं सराहना गर्छ । त्यही ढंगले सरकारले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ, प्रबद्र्धन गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्र इमानदार भएर अघि बढ्नु जरुरी छ । सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ र गरिरहेको पनि छ ।
अमेरिकाले नेपाली तयारी पोसाकका ६६ वस्तुमा भन्सार सुविधा दिने भनेको थियो । तर, ती वस्तुको सूचीमा निर्यातको उच्च सम्भावना भएको गार्मेन्ट परेको छैन । यसका लागि सरकारले केही पहल गर्न सक्दैन ?
रेडिमेड परेन भन्ने गुनासो छ । त्यसलाई समावेश गर्र्न एक चरण पार गरेपछि थप परिमार्जन गर्न सकिन्छ । छुटेका गार्मेन्टका आइटम पनि समावेश हुनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । यसको कार्यान्वयनकै लागि मन्त्रालयअन्र्तगत वीरगन्ज चिनी कारखानाको ३५० बिगाहामा गार्मेेन्ट उद्योग खोल्ने तयारी छ । सिमरा सेजभित्र पनि गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र खोल्ने तयारी भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बिप्पा हुन सकेन ? बिप्पाको विषयमा किन पछि हट्यो मन्त्रालय ?
भ्रमणका क्रममा उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्तालाई अनुरोध गर्ने, सकारात्मक रुपमा पारवहन र वाणिज्यसँग सम्बन्धित सन्धि भएका छन् । चीनसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाएर अघि बढाउने काम भएकै छ । तर, जहाँसम्म बिप्पाको कुरा हो, यस विषयमा हामीले गृहकार्य गरेका थियौं । छलफल भएकै हो । मस्यौदा चीन पठाइएको थियो उताबाट छलफल भएर पनि आएको । मुख्य कुराचाहिँ दुवै मुलुकका अधिकारी एकै ठाउँ बसेर छलफल हुन सकेन । त्यसैले अहिले बिप्पा हुन सकेन ।